PowerInbox: Ezigbo Ihe Emebere, Akpaghị Aka, Multichannel Izi ozi Platform | Martech Zone
Dị ka ndị na-ere ahịa, anyị maara na itinye ndị na-ege ntị ziri ezi ozi ziri ezi banyere ọwa kwesịrị ekwesị dị oke egwu, mana dịkwa oke ike. Site na ọtụtụ ọwa na nyiwe-site na mgbasa ozi mmekọrịta na mgbasa ozi ọdịnala-o siri ike ịmata ebe ị ga-etinye mgbalị gị. Ma, n’ezie, oge bụ ezigbo akụ - enwere ihe ị ga - eme (ma ọ bụ na ị nwere ike ịme ya), karịa oge na ndị ọrụ ga - eme ya.
Ndị nkwusa dijitalụ na-enwe mmetụta nke ikekwe karịa ụlọ ọrụ ọ bụla ọzọ, site na ụlọ ọrụ akụkọ ọdịnala gaa na blọọgụ nchịkọta, ibi ndụ na niche, mbipụta nwere mmasị pụrụ iche. Tụkwasị obi na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na ala na-amị amị, na ihe dịka ụlọ ahịa dị iche iche na-asọ mpi maka ndị ahịa, itinye ndị na-ege ntị n'ọrụ abụghị naanị ihe kacha mkpa-ọ bụ ihe lanarịrị.
Dị ka ndị na-ere ahịa maara, ndị na-ebipụta akwụkwọ na-adabere na mgbasa ozi iji mee ka ọkụ na sava na-asọ oyi. Anyị makwaara na ịnweta mgbasa ozi ndị ahụ n'ihu ndị na-ege ntị ziri ezi kwesịrị ịdị mkpa maka ị nweta ego. Mana ka kuki ndị ọzọ na-aghọ ihe mgbe ochie, ịtụle ndị na-ege ntị abụrụla ihe ịma aka ka ukwuu.
Ndị ahịa nke oge a nwere atụmanya dị elu maka ịhazi onwe-n'ezie, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 3 n'ime mmadụ 4 ọ bụla na-ekwu ha agaghị etinye aka na ọdịnaya ahia ọ gwụla ma emebere ya maka ọdịmma ha. Nke ahụ bụ nnukwu nchegbu maka ndị mbipụta akwụkwọ na ndị na-ere ahịa-na-ezukọ na ụkpụrụ dị elu na-esiwanye ike ka nsogbu nzuzo data na-adaba na ụkpụrụ dị elu maka ịhazi onwe. Odi ka anyi nile jidere 22!
Ihe ikpo okwu PowerInbox na-edozi ihe nzuzo / ihe ndi n’eme ka ndi mmadu ju maka ndị nkwusa, na-enye ha ohere izipu ozi akpaaka, ahaziri iche na ndị debanyere aha na email, weebụ, na ịpị ọkwa na-apụtụ-na ọwa zuru oke. Iji PowerInbox, onye mbipụta ọ bụla nwere ike izipu ọdịnaya ziri ezi nye onye ziri ezi karịa ọwa kwesịrị ka ọ laa nzaghachi.
Nhazi Ndabere Afọ Email
Nke a bụ otu o si arụ ọrụ: Nke mbu, PowerInbox na - eji adreesị ozi-e nke ndị debanyere aha - ọ bụghị kuki - iji chọpụta ha gafee ọwa niile. Gịnị kpatara email?
Ọ na-abanye na ya, yabụ ndị ọrụ debanyere / kwenye ịnata ọdịnaya, n'adịghị ka kuki ndị na-arụ ọrụ n'azụ Mpaghara.
Ọ na-adịgide adịgide n'ihi na ọ jikọtara ya na onye dị adị, ọ bụghị ngwaọrụ. A na-echekwa kuki na ngwaọrụ ahụ, nke pụtara na ndị mbipụta amaghị na ọ bụ otu onye ọrụ ahụ mgbe ha si n'iji iPhone gaa na laptọọpụ ha. Site na email, PowerInbox nwere ike soro omume onye ọrụ n'ofe ngwaọrụ yana gafee ọwa ma lekwasị anya ọdịnaya dị mma n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Ọ bụ eziokwu. Ebe ọ bụ na anaghị ekekọrịta adreesị email, data ahụ pụrụ iche na onye ahụ, ebe kuki na-anakọta data na onye ọrụ ọ bụla nke ngwaọrụ ahụ. Yabụ, ọ bụrụ na ezinaụlọ keere mbadamba nkume ma ọ bụ laptọọpụ, dịka ọmụmaatụ, data kuki bụ ọgba aghara nke nne, nna, na ụmụaka, nke na-eme ka ịchebe ihe na-agaghị ekwe omume. Site na email, a na-ejikọta data ahụ na onye ọrụ ọ bụla.
Ozugbo PowerInbox mara onye debanyere aha ya, injin ya AI wee mụta na mmasị ndị ọrụ dabere na mmasị na omume mara iji wuo profaịlụ onye ọrụ. Ka ọ dị ugbu a, ihe ngwọta ahụ na-esite na ọdịnaya ndị bipụtara iji dabaa ọdịnaya dị mkpa na ndị ọrụ dabere na profaịlụ ha mara na ihe omume n'oge.
Mgbe ahụ, PowerInbox na-enyefe ndị ọrụ ọdịnaya ahụ na-akpaghị aka site na ozi ịntanetị ma ọ bụ nkwupụta nkwanye dabere na ọwa egosipụtara ịchụpụ aka dị elu. Dị ka ikpo okwu na-arụ ọrụ, ọ na-anụcha ọdịnaya oge niile ma na-emegharị ihe nlele ahụ maka ịhazi ahazi nke ọma.
Ebe ọ bụ na ọdịnaya dị oke mkpa ma baa uru, ndị debanyere aha nwere ike ịpị, na-akwọ ụgbọala na ntinye ego maka ọdịnaya nke ndị mbipụta. Ọbụna nke ka mma, PowerInbox na-enye nhọrọ ntinye ego emere, na-enye ndị mbipụta ohere itinye ọdịnaya ọdịnaya ozugbo na ozi ịntanetị ha ma na-agbanye ọkwa.
Ntọala ntọala-ma chefuo ya n'elu ikpo okwu na-enye ndị nkwusa ohere ime ka ndị na-ege ntị na-etinye aka n'otu n'otu ọdịnaya ọ bụla - ihe na-agaghị ekwe omume na-enweghị PowerInbox's automated platform. Na, n'ihi na ntinye mgbasa ozi na-eme na akpaghị aka, ọ na-echekwa ndị nkwusa oge dị ukwuu na nhazi na ịzụ ahịa ahịa. Ọbụna ọ na-ejikọ ya na njikwa Google Ad, na-enye ndị mbipụta ohere ịdọrọ mgbasa ozi sitere na ngwa ahịa dị adị n'ịntanetị na-enweghị mgbalị ọ bụla.
Ihe Mere Ndị Ahịa Ga-eji Na-elekọta
Ihe ikpo okwu PowerInbox kwesịrị ịdị na radar ndị ahịa maka ebumnuche abụọ:
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akara ọ bụla bụ onye mbipụta ụbọchị ndị a, na-ekesa ọdịnaya blog, nkwalite email yana kwalite ọkwa maka ndị debanyere aha. Ndị na-ere ahịa nwekwara ike mejuputa usoro ikpo okwu PowerInbox iji jikwaa ọdịnaya na ịkesa ọdịnaya ọtụtụ, yana ọbụnadị ịkpata ego. Branddị nwere ike itinye mgbasa ozi mmekọ na ozi ịntanetị ha ma ọ bụ tụlee ndụmọdụ ngwaahịa ha dị ka "mgbasa ozi" n'ime ozi ịntanetị azụmahịa ha, na-atụ aro ụfọdụ ọfụma mara mma iji soro akpụkpọ ụkwụ ọhụrụ ahụ, dịka ọmụmaatụ.
Kpọsa ndị na-ebipụta dijitalụ na-eji ikpo okwu PowerInbox eme ihe bụ ohere dị ukwuu iji tinye akara gị n'ihu ndị na-ege ntị na ndị na-ege ntị. Ọbụna tupu ọrịa a na-efe efe, 2/3 nke ndị debanyere aha kwuru na ha ga-pịa mgbasa ozi na akwụkwọ ozi email. N'ime ọnwa isii gara aga, PowerInbox ahụla mmụba 38% na email meghere, nke pụtara na itinye aka na email na-arị elu. Na 70% nke ndị ọrụ debanyere aha iji kwalite ọkwa, yabụ enwere ike ebe ahụ, yana.
Dika ndi mmadu na-ele anya karia ndi ahia site na ngbanwe nke onwe na nke ndi mmadu mejuputara, nhazi dika PowerInbox na-enye AI na akpaaka nke nwere ike ikwe ka anyi nweta ogo di elu. Na, site n’inye ndị na-ege anyị ntị ọtụtụ ihe ha chọrọ, anyị nwere ike iwulite mmekọrịta siri ike karị, na -emekarị mmekọrịta na-eme ka iguzosi ike n’ihe na ego ghara inweta.
Nweta ngosipụta PowerInbox
Tags: email nkeonweikpo okwu izi oziọtụtụ oziigbe ike